Izimboni nezimayini, amachweba, izindawo zokwakha - iHengyi Electrical Co, Ltd.
Eminyakeni yamuva nje, izinkampani zezimboni zezwe lethu zamukele imishini eminingi yokulungisa i-SCR kanye ne-SCR. Lokhu kuholele ekwehliseni okukhulu ikhwalithi yokusatshalaliswa kwamandla. Okubi kakhulu ukuthi uchungechunge noma ukufana okufanayo okwenziwe ama-harmonics asezingeni eliphezulu akhiqizwa yilawa madivayisi kanye nohlelo lwe-capacitive reaction kanye ne-impedance yohlelo kwinethiwekhi yokusabalalisa amandla ngaphansi kwezimo ezithile, okuholele ekulimaleni okuthile kwemishini ethile. Ukulimala kwama-harmonics ohlelweni lokusabalalisa amandla ethekwini kudonse amehlo abantu. Kuyaphuthuma ukucindezela ama-harmonics nokwenza ngcono ikhwalithi yokusatshalaliswa kwamandla.
Ngenxa yokusetshenziswa kwama-cranes omnyango oshesha kakhulu echwebeni, amadivayisi asebenzayo wokunxeshezelwa kwamandla awanakusetshenziselwa isinxephezelo sezinto zamandla. Ama-harmonics ageleza ngezintambo nama-transformer abangela ukulahleka okwengeziwe, futhi ukulahleka okusebenzayo komsebenzisi kuyenyuka, okudinga izikweletu ezengeziwe zikagesi. Ngaphezu kwalokho, kutholwa izinhlawulo zamazinga wenzalo ezisukela ku-10 000 kuya ku-20 000 njalo ngenyanga. Ngaphansi kwesimo sokukhuthaza ngamandla ukonga ugesi kanye nokwehliswa kokusetshenziswa, isayensi nobuchwepheshe kanye nokuvikelwa kwemvelo, itheku litshalile izimali ngesikhathi esifanele ukwenza ikhwalithi yamandla.
Ngemuva kokufaka idivaysi yesinxephezelo samandla we-anti-harmonic esebenzayo, isilinganiso samandla esifinyelelwe ngenhla kuka-0,95, okuqukethwe kwe-harmonic kuncishiswe kakhulu, umphumela wokonga amandla ubusobala, futhi ikhwalithi yamandla wohlelo yathuthukiswa kakhulu.